ks – Page3– मझेरी डट कम
फाल्टो समयको असल उपयोग (‘निर्वस्त्र नगरीमा’ को विमोचन)
निजी गाडीहरूले टुरिजम बोर्डको आँगन छपक्क ढाकेको तडकभडक देख्दा नै मलाई उल्टी आउनु खोज्यो ।
म हतारिँदै सभाहल भित्रिएँ । कुर्सी निम्ठो भएर दर्शक सिँढीमा पोखिएको ।
विष्णुविभु घिमिरेले भट्ट्याए, “यसपीले आफ्नो कविता वाचन गर्दा मो निदाइर’को थेँ । कविता कविता नै रै’छ । कविताभन्दा भिन्न केही रै’नछ । विषय वस्तुलै कसरी पेस्ने तेसैमा कविता भर पर्ने । घण्टाघरलै कैयौँले देखे । तो बाटो भएर हिँड्दा । अरुले नसोच्या, नदेख्या कुराहरू लेखे कविता मजाले भूपिले । मातेको मान्छे गतिलो मान्छे नभए पनि तेसैको बारे अमर कविता लेख्नु भो वैरागी दाइले । एसपीको कविताहरूमा सुन्दर भाषा, नौलो विम्व, चलन चल्तीको शब्दहरू पाएँ ।”
आज ऊ मेरो घरमा आएकी थिई (चार मुक्तक)
आज ऊ मेरो घरमा आएकी थिई
मस्त बहार बनेर छाएकी थिई
तितो, पिरो, अमिलो सबै भुलाई
गुलियो रसबरी प्रीत लाएकी थिई
सधै उधारो खातामा लेखे जस्तै भो जिन्दगी
दिन्मै नमिठो सपना देखे जस्तै भो जिन्दगी
जीवनलाई आलोचना गरु कुन शब्द लेखी
बिना सित्तै मृत्यु बाटो छेके जस्तै भो जिन्दगी
कुहिएको छानीछानी फाली बाकी हरियो चै
बजारमा साग जस्तो बेचे जस्तै भो जिन्दगी
शिरको सिँन्दुर एक धर्को
शिरको सिँन्दुर एक धर्को मेटिन नि सक्छ
मायामा नि चिसो कतै भेटिन नि सक्छ ।
मेरो प्राण तिमीनै हौ भन्दै माया गर्दा पनि
चोखो मुटु आज आफ्नै रेटिन नि सक्छ ।
खान्न खान्न भन्दा भन्दै पनि
खाइसकेको छु मैले
प्यारी तिम्रो कसम !
जान्न जान्नभन्दा भन्दै पनि
घुमिसकेको छु मैले
प्यारी तिम्रो प्रेमको बगैचा!!
भिजेका छन् नयनहरू
भिजेका छन् नयनहरू, सुकेका छ्न ओठहरू
आखिर कस्ले बुझ्छ यहाँ, मेरो मनको चोटहरू
जति स्वच्छ निश्चल मेरो, माया प्रीति भने पनि
आखिर सबले भुल्दा रैछन, पाएपछि नोटहरू
भरिया र विकास
हामी देशमा सजीव भै काम गरेर रहन्छौँ
यो देशलाई फलाई फुलाई गर्न हामी चाहन्छौँ
सजीव हुन चाहन्छौँ देशमा विकास गर्नलाई
देशको विकाश गर्दछौँ उकालो हामी चढ्नलाई
(स्व कर्णबहादुर माझीले २०३४ मा लेख्नुभएको कविता)
क्याम्पस पढ्ने छोरो
छोरो क्याम्पस गाको छ
मुन्द्रे फेसन लाको छ
घरमा बस्दा एलर्जी
डिस्को, साइवर धाको छ
क्यान्टीनमा खाको छ
हिन्दी गाना गाको छ
माया कति लाको छ !
आज हाकिम फेरियो
आज फेरि उसको हाकिम फेरियो । पुरानो हाकिम हुँदा उसले प्रशस्त फाईदा लुट्यो । कहिले साथीहरूको कुरा लगायो । कहिले फाईल लुकाएर कार्यालयका कार्यक्रमहरू फर्जी रुपमै सम्पन्न गरायो ।
यस कार्यको लागि हाकिमको पुरा समर्थन प्राप्त गरेकै हो उसले । हाकिमकै पछि लागेर सबैतिर जान्थ्यो । कार्यालयको काम बाहेक घरमा पनि उसको आवत जावत चल्दथ्यो ।
घामलाई घाटमा पुर्याएर
घामलाई घाटमा पुर्याएर जूनकिरी फर्किरहँदा
आउनु तिमी चन्द्रमाले सूनपानी छर्किरहँदा
मै बस्नेछु ओ प्रिय ! तिम्रै बाटो हेरी
चौतारीको बरको रुखमा हाम्रै नाम कोरि
कि त आउनु मध्यरातमा ठुलो पानी दर्किरहँदा
नत्र आउनु चन्द्रमाले सूनपानी छर्किरहँदा
कठै ! जिन्दगी यो
कठै ! जिन्दगी यो सरापै सरी भो
सधैँ चोट मिल्दा त पापै सरी भो
हरायो खुसीको सुनौलो बिहानी
नपाएर हाँसो अफापै सरी भो
आऊ कलम यात्रा थालौ
श्री ५ र श्री ३का कथा मात्र होइन
कर्णाली, रोल्पा, डोल्पाका
कथाहरू पनि लेख्नु पर्छ ।
जित्नेहरूको ईतिहास मात्र होइन
हार्नेहरूको पनि ईतिहास कोरिनु पर्छ ।
खै अनाहक क्रुद्ध, बन्छौ गर्ने के ?
अन्धो हुन्छ प्रेम, भन्छौ गर्ने के ?
उल्टो सुल्टो हेर्ने दृश्य, पुरानै लाग्छ
दिलमा सजाई जरो, खन्छौ गर्ने के ?
आज नेपालमा राष्ट्रवादका नारा
आज नेपालमा राष्ट्रवादका नारा धन्किदै छन्
चुनाव चाहिने र नचाहिनेमा स्वार्थी भाषण सन्किदै छन्
केही गर्छु भन्नेहरूले देशलाई के नै दिए खोई
प्रकृतिको बज्र हामी माथि पर्दा छिमेकीको सीमा तन्किदै छन्
दुई सयौं भानु जयन्तीको पुनित उपलक्ष्यमा राजविराजमा साहित्यिक गोष्ठी सम्पन्न भयो । विश्व नारी नेपाली साहित्य समाज, सप्तरी र सामुदायिक सेवा केन्द्र, राजविराजको संयुक्त आयोजनामा उक्त गोष्ठी भएको थियो ।
सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कुमार पाठकको अध्यक्षता तथा नेपाली साहित्य समाजकी सगरमाथा अञ्चल स्तरीय उपाध्यक्ष करुणा झाको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा समाजकी जिल्ला कोषाध्यक्ष पूनम पोखरेलद्वारा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो ।
शशि शाहका घोडाहरू
मदन राई 'लामाखुले'
ऊ उड्छ आकशमा
ऊमाथि घोडा चड्छ
करेली खैंचेर घोडाले उस्लाई दौडाउछ्
हातमा कुचिको सिर्कना लिएर
शसी शाहको टाउकोमा
दुख्ने गरी हिर्काउछ,
अनि महाभारत युद्ध भए ठाउँतिर
जिन्दगीका मुद्धाहरू कति-कति छिने मैले ।
मान्छे रुपी आकृतिमा कालो मन चिने मैले ।
रात रात हुन्न केही धैर्य याहा गर्ने पर्छ,
बर्षौ बर्ष कर्म बेची थोरै खुशी किने मैले ।
जिन्दगीको खुसी हाँसो, निख्रिएर रोएको छ ।
कसको आँखा लागेर हो, भताभुङ्ग भयो जम्मै
प्वालै प्वाल पर्ने गरी उधृएर रोएको छ ।
आजकल अचानक हेमन्त घोरिएको देखें । ऊ कसैसँग त्यति घुलमिल हुदैन । चुपचाप एक्लो कुनामा बसेर घोरिरहन्छ । उसलाई ज्यान मुद्दामा यहा ल्याएको पनि धेरै भयो । उसलाई भेट्न कोही आएको देखिन । चाडपर्वमा ऊ झन् बिरक्तिन्छ । मैले आफ्नो घरबाट ल्याएको काने कुरा दिदा उसका आँखा रसाउछ । भावुक हुदै भन्छ हजुर जस्तो मानिस मेरो जीवनमा साथसहयोग पाएको भए मेरो जीवनले मुक्ति पाउथ्यो उसका भनाइले मलाई च्वास्स घोच्यो । सोचे यसलाई ज्यान मुद्दामा फसाइएको हो भनी अड्कल काटें । उसका दिन चर्या हेर्दै गएँ त्यस रात उसैको बारेमा सोचिरहें ।
बिना लगानी तिब्बत भ्रमण
मैले ठानेको थिए महान पुरुषहरूको जीवन भोगाई मात्र पठनीय संस्मरण हुन्छ । तर खै किन मैले भोगेका भोगाईहरू पनि पो भकाभक छापिन थाले । कि पत्रिकालाई पेज भर्न आर्टिकलको खाँचो छ वा यो संस्मरणमा केही दम छ, मैले केही ठम्याउन सकिराखेको छैन । त्यसो हुनाले म विगत जीवनका भोगाईहरूलाई भकाभक सार्वजनिक गर्न अभिप्रेरित भइरहेको छु ।
अँ कुरा १८देखि २० वर्ष अघिको हो । त्यस बेलामा म श्री गुवाक्षेसा नि. मा. वि हटिया – २ हुङ्गगुङ्ग संखुबासभामा पढाउथे । शायद ५०देखि ५२ सालतिर होला, मेरो बसोबास त्यही गाउका प्रख्यात व्यापारि ठिलेन भोटेको घरमा थियो । जसको तिब्बतमा आफन्तहरू भएका कारण उनलाई तिब्बत जान आउन त्यति कठिनाई थिएन ।